MATANGA MAGOGO Kumiswa / FRO
(inowanikwa yeS-105,115,106, 305)
Inobata 76% yeJolts & Vibrations. Yakareruka uye 10 x yakasimba kudarika
tsika forogo. Inouya ne6 "x 1 ¼" Makasitoma.
Yakakura kune vashandisi vanoshanda wiricheya!
mushandisi zvinobatsira kubva pakuva neanoshamisira mafosi akaiswa
pavanotambira ivo chigaro.
Shock inobata forogo, inotora 76% yemasoja &
kudengenyeka kunokanganisa kutasva kwevashandisi wiricheya
Inotsiva maforks akaomarara anouya akajairika wiricheya.
Yakareruka & kagumi kusimba pane echinyakare caster maforogo.
Kunodzikisa pasi-kusvika-pachigaro kukwirira kusvika gumi nesere ”
Inouya ne6 "x1" yakasimba isina bata isina polyurethane kumberi casters
Inowanikwa mune nhema nhema
Hupenyu hwese wakatemerwa garandi
Inotsigira huremu masosi kubva: 120-160 lbs
(PSG35F60) & 160-220 lbs (PSG35F61)